Cinderella Foto Facial Treatment | | Yangon Thu Michelle
(Giveaway Included)ရန်ကုန်သူမီရှဲတစ်ယောက် ညဘက်တွေဆို မအိပ်၊ ပြီးရင် ရိုက်ကူးရေးရှိတဲ့ရက်ဆို လူးလဲထ၊ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး ကမူးရှူးထိုးနဲ့ သွားရတာ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က ဘာလုပ်လုပ် ခံနိုင်ရည်ရှိနေပေမယ့် ၂၃နှစ်ကျော်လာတာနဲ့ အသားအရေက ဇာတိပြလာတယ်။ အဆီဖုတွေထွက်တယ်။ ဝက်ခြံတွေပေါက်တယ်။ ပြီးရင် အငြိမ်မနေနိုင် ဖဲ့မိတော့ အမာရွတ်ကျန်တယ်။ ချွေးပေါက်တွေဆို မိတ်ကပ်ဖျက်လိုက်ရင် ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို မြင်ရလာတာ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ skin care တော့ လိမ်းတာပဲ။ ထူးခြားလာတယ်လို့ကို မခံစားမိတော့တာ …ကြာပြီ။ဆေးခန်းဘာညာ ကြော်ငြာတွေလဲ မြင်ဖူးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝက်ခြံအတွက် ကုကြတယ်ပဲထင်တာ။ ဆေးခန်းဆို ဆေးပဲကုတယ်ထင်တဲ့ ခပ်နုံနုံမီရှဲအတွက် ဒါတွေက အလှမ်းဝေးတယ်။ အကြာကြီးငြိမ်ငြိမ်နေရတာလဲ မကြိုက်တော့ ရောက်ကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုကျတော့ လုပ်သင့်ပြီထင်လို့ နည်းနည်းပါးပါးလိုက်စုံစမ်းတော့ ရုံးနဲ့နီးတဲ့ ရန်ကင်း အရိယမဂ္ဂင်လမ်းက @Aesthetic Villa ကိုရောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိတာနဲ့ ဆရာဝန်ကိုပဲ ဖြစ်ချင်တာကို ပြောပြတယ်။ ဆရာဝန်က လုပ်သင့်တဲ့ ကုထုံးကို အကြံပေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘက်ဂျက်နဲ့ ချိန်ကိုက်ပြီး ညှိနှိုင်းလျှော့ပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့မှ Cindrella Foto Facial Treatment ဆိုတာလေးကို ရွေးလိုက်တယ်။Result ကတော့ ကြိုက်လွန်းလို့ ဖုန်းထဲမှာ မျက်နှာပုံတင် ပုံပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်လောက်ရှိသွားမလားဘဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်တင်ကြွားရတာလည်း အမော …။ ကြည့်ချင်ရင် ကောမန့်မှာ ရှိတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ @aesthetic villa ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသားအရေမတူတော့ မီရှဲအကြံမပေးတတ်လို့။ ပေ့ခ်ျကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်သာမေးကြည့် ဝန်ထမ်းအစ်မတွေ အရမ်းစိတ်ရှည်ကြတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့လည်း appointment ယူပြီးမေးလို့ရတယ်။ ဈေးလည်း မဆိုးဘူး။ အစားစားပဲ။ ဒီတော့ မီရှဲတစ်ယောက်တည်းလှရုံတင်မဟုတ်ဘဲ အလှအပကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း မီရှဲလုပ်တဲ့ Cindreall Foto Facial Treatment လုပ်လို့ရအောင်လို့ ငါးယောက် (၅ ယောက်) ကို မဲဖောက်ပေးဦးမှာ။ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ရမယ့်အချက်တွေကို သေချာဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။1. Yangon Thu Michelle နဲ့ Aesthetic Villa ပေ့ခ်ျကို Like လုပ်ပါ2. သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို mention နဲ့ ဒီဗီဒီယိုကို Share ပေးပါ3. Share ပြီးရင် Share ထားတာကို screenshot နဲ့ ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ comment ပေးပေးနောက်တစ်ပတ် ၁၄ရက် ၈လပိုင်းက ကံကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော် …ဆိုတော့ကာ အမြဲတမ်းလှနိုင်ကြပါစေချစ်တဲ့ရန်ကုန်သူမီရှဲ …. <3#yangonthumichelle#lifestyleblogger#michellemayshell#AestheticVilla #CindrellaFotofacial #ShinyGlowySkin#BestResult#ExploreYourBeautyWithUs
Posted by Aesthetic Villa on Friday, August 9, 2019
မကျြနှာအလှဆိုတာ လူတဈယောကျကိုမွငျရငျ အရငျဆုံး သတိထားမိတဲ့အရာပဲမလား။ ရနျကုနျသူမီရှဲလို့ ပွောရငျလညျး မကျြနှာနဲ့ ဆံပငျပုံစံကို တှဲမှတျထားတာပဲလေ။
မီရှဲက အသားအရညျထိနျးသိမျးနညျးတှကေို မဂ်ဂဇငျးတှေ ဂြာနယျတှထေဲက အမွဲဖတျတယျ။ တက်ကသိုလျစတတျကတညျးက မကျြနှာအစိုဓာတျထိနျးတဲ့ခရငျတှေ လိမျးတယျ။ ဆိုတော့ အသကျ ၂၀ ကြျောတဲ့အခြိနျမှာ သိပျပွီးပကျြစီးတာ မရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့ ၂၀ကြျော အလယျရောကျလာတော့ သာမနျစကငျကဲနဲ့ မရတော့ဘူး။ လူက စိတျဖိစီးတာတှေ ပိုမြားလာတယျ။ လူကွားထဲသှားနရေတော့ နပေူ လပေူ ဖုနျမှုနျ့တှနေဲ့ အသားအရညျက ခဏဆိုတာနဲ့ အဖုတှပေေါကျလာရော။ ဒါမြိုးတှေ ရကျဆကျလာရငျ မကျြနှာကခြောငျကပြွီး ညဈလာတယျ။
အခုကတြော့ အလုပျလုပျတယျ … ကိုယျပိုငျဝငျငှရှေိလာတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ရှာလို့ရတဲ့ပိုကျဆံကို ကိုယျ့ရဲ့မကျြနှာအတှကျသုံးတယျ။ ဘယျလိုသုံးလဲဆိုတော့ facial treatment ကောငျးကောငျးယူပွီး ဇိမျယူတယျ။ မီရှဲလုပျတဲ့ treatment ကတော့ Matis Spa လို့ချေါတယျ။ မကျြနှာကို သာမနျ ဟိုလိမျး ဒီလိမျးမဟုတျပဲ အရပွေားအလှာနကျနကျထိအညဈအကွေးတှဖေယျပေးပွီး သုံးပေးတဲ့ ပစ်စညျးအမြိုးအစားရယျ နှိပျပေးတဲ့နညျးတှကွေောငျ့ လုပျတိုငျးအိပျပြျောသှားတယျ (ဗီဒီယိုထဲမှာ အိပျနတော ဟောကျတောငျဟောကျတယျ)။ နိုးလာရငျ မကျြနှာလေးကကွညျပွီး လနျးနတောပဲ။ လုပျတိုငျးလဲကွိုကျတယျ။
ဈေးတော့နညျးနညျးမြားတယျ။ အခြိနျလဲတဈနာရီကြျောကြျောလောကျကွာတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခွား treatment နဲ့မတူတာက သူက luxury spa အမြိုးအစားဆိုတော့ ပစ်စညျးကောငျးသုံးပွီး အနှိပျခံ၊ ဇိမျကကြလြုပျပေးတာဆိုတော့ မီရှဲက ကိုယျ့ဘာသာ ဆုခခြငျြတဲ့အခြိနျဆို သှားတယျ။
ဒီ Matis Spa ကိုလုပျခငျြတယျဆိုရငျ သုံးယောကျ (၃ ယောကျ) ကို မဲဖောကျပေးဦးမှာ။ ပါဝငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ လုပျရမယျ့အခကျြတှကေို သခြောဖတျကွညျ့စလေိုပါတယျ။
1. @Yangonthumichelle နဲ့ @Aesthetic Villa ပခြေျ့ကို Like လုပျပါ
2. သူငယျခငျြးနှဈယောကျကို mention နဲ့ ဒီဗီဒီယိုကို Share ပေးပါ
3. Share ပွီးရငျ Share ထားတာကို screenshot နဲ့ ဒီဗီဒီယိုအောကျမှာ comment ပေးပေး
နောကျတဈပတျ ၂၆ရကျ ၉ လပိုငျးဆို page ကို ပွနျဝငျကွညျ့ပေးနျော။ ဆိုတော့ကာ အမွဲတမျးလှနိုငျကွပါစေ
Next post: မီရှဲနဲ့ မှေးလမှာ အမှတျတရ Yangon Heritage Trust နဲ့ပူးပေါငျးပွီး လြှောကျသှားခွငျး